Nagu saabsan - SHENZHEN FUXINGYE IMPORT & EXPORT CO., LTD
SHENZHEN FUXINGYE IMPORT & Dhoofinta CO., LTD
Shirkaddayada waxaa la aasaasay 1996, warshad la dhisay 2010, oo ku taal degmada Longgang, Shenzhen, gobolka Guangdong. Warshaddeenu waxay ku takhasustay soosaarida darajad sare ama dhexe oo ah weel ama dhagxaanta weelka wax lagu dubo, dhoobada deegaanka u fiican.
Ku dhowaad 100 shaqaale wadar ahaan
Aagga Warshadda: 10,000 m²
Awood wax soo saar bille ah: 1.5-1.8 million pc
Rarista 60-70 weelal bishiiba
Shirkadeena & warshadeena waxay horey u ansixiyeen DISNEY, BSCI, SEDEX iyo Shahaadada Nidaamka Tayada. ISO9000-2005. Dhanka kale, waxaan leenahay warshad bir birta ah oo ku taal JIEYANG, gobolka GUANGDONG. Waxaan kuu soo bandhigeynaa heerar kala duwan oo ah qalabka goynta birta birta ah, qalabka jikada iyo miisaska kale ee birta ahama.
Waxaan taageersanahay inaan siino macaamiisha wax soo saar tayo leh, u hogaansanaano mabda'a naqshadeynta marka hore, tayada ugu horeysa, waqtiga gaarsiinta waqtigeeda, si macaamiisha caalamka loo siiyo alaabo iyo adeegyo qanciya.
Isla mar ahaantaana, waxaan leenahay koox naqshadeeye oo xoog leh.
Waxaa jira 4 naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah shirkadeena. Dhanka kale, naqshadeeyaha waqtiga dhiman ee adduunka oo dhan sida Faransiiska, Australiya, Talyaaniga, Turkiga, Hong Kong iyo wixii la mid ah. 2dii biloodba mar waxaan soo bandhigi doonnaa ugu yaraan 20 naqshado cusub oo suuqyo kala duwan ah. Iyada oo ku saleysan awoodayada naqshadeynta adag, waxaan had iyo jeer hogaamineynaa isbedelka. Taasi waa sababta ay macaamiil badan oo tayo leh ay ula shaqeeyaan.
Waxaa jira macaamiil dhowr ah oo na aaminay waqti dheer kuwaas oo ka yimid Yurub, USA, Australia, Bariga-Aasiya, Turkiga, Dubai, Ruushka iwm. Waxaan u fidinaa adeegga 1 tallaabo macaamiishaas. Laga soo bilaabo naqshadeeyaha illaa shay-baarka, dalbo xaqiiji inaad u rareyso xitaa isku-darka alaabooyinka kala duwan bakhaarkeenna. Waxaan bixinnaa adeeg fikira oo faahfaahsan.
Warshadahayagu mar hore ayey dhaafayaan nidaamka xakamaynta tayada ee ISO9000-2005. Waxaan si adag u raacaynaa halbeegga si aan u hubinno in badeecad waliba saldhiggeedu yahay xaalad wanaagsan.
Waxaan u foorarsannay si aan u abuurno waxyaabo badan oo ka sii yaab badan macaamiisheenna oo dhan qiime qiimo leh iyo adeegga ugu fiican.
Nolol tayo leh!